Ogaden News Agency (ONA) – Dhagayso: Iskool lagu baranayo siyasada Itobiya oo laga furay magaalada Borame ee Jamhuriyada Somaliya
Dhagayso: Iskool lagu baranayo siyasada Itobiya oo laga furay magaalada Borame ee Jamhuriyada Somaliya
Posted by ONA Admin	/ September 8, 2015
Magaalada Boorame ee gobolka Awdal ee Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa laga furay Iskool lagu baranayo siyaasada Itoobiya oo ay dhigayaan macalimiin Itoobiyaan ah oo khaas ah.
Furida iskool kan oo ah kii ugu horeeyey ee laga hirgaliyo jamhuuriyada soomaaliya dhexdeeda ayaa lagu fasiray inay kamid tahay isbalaadhinta Itoobiya ee ay ku sii fidayso Jamhuuriyada Soomaaliya,waxayna ujeedadeeda uweyni tahay sidii ay Soomaalida u galin lahayd siyaasadeeda iyo Itoobiyaanimo.
Aqoonyahano u dhashay gobolka Awdal ayaa talaabadan ku macneeyey maskax duul cusub oo ay Dowlada Itoobiya doonayso inay ku itoobiyaaneyso dadka Soomaaliyeed kagana dhex samaysato dad siyaasdeeda taageersan.
Macalimiinta Iskool kan dhigi doona ee loogu talagalay inay dadka ka raaridaan siyaasada Itoobiya ayaa ah kuwo si khaas ah loosoo xulay oo laga keenay Itoobiyada kore,iyadoo ay magaalada Boorame tahaye hooygii aqoonta iyo cilmiga ee Soomaaliya ayna ku taalo jaamacada caanka ah ee facaweyn ee CAMUUD sanad kastana ka baxaan intaas oo aqoonyahan ayaa hadana macalimiinta iskoolkan kor looga keenay.
Guux iyo diidmo balaadhan ayaa laga dareemayaa magaalada Boorame dhexdeeda waxayna siyaasiyiin iyo aqoonyahan badan oo u dhashay gobolka Awdal ku beeriyeen shacabka gobolkaas Awdal inaysan marna ogolaanin in siyaasada Itoobiya la dhex keeno deeganadooda ayna ka dhiidhiyaan sidii ay Iskool kaas iyo siyaasad kasta oo Itoobiya kaga imanaysa u hor istaagi lahaayeen.
1. Z0000168 - My Recording